गिफी कसरी प्रयोग गरिन्छ? सेवा समाचार बारे पछिल्लो मेलिiling डाटाबेस
AF SQ AR HY AZ BE BN BG CA ZH-CN CO CS DA NL EN EO ET TL FI FR FY DE EL HI HU IS ID GA IT JA KO LO LA LV LT MK MS ML MN NE NO PL PT RO RU SR SL ES SU SV TH TR UK UZ VI ZU
24 /7ग्राहक समर्थन
सोम - रवि: 9: 00 - 21: 30
इमेल सूची बनाउनुहोस्
देश इमेल सूची
फोन नम्बर सूची
सी स्तर कार्यकारी सूची
कार्य प्रकार्य ईमेल डाटाबेस
रियल एस्टेट ईमेल डाटाबेस
गिफी कसरी प्रयोग गरिन्छ? सेवा समाचारहरूको बारेमा
ताजा र सफा गरिएको
भर्खरै अद्यावधिक गरिएको
पछिल्लो मेलि Dat डाटाबेससँग 300 मिलियन व्यवसाय (b2b) ईमेल सूची र 400 मिलियन उपभोक्ताहरू (b2c) विश्वव्यापी देशबाट ईमेल डाटाबेस छन्। पछिल्लो मेलिंग डाटाबेस सँधै तपाइँको कम्पनी मेलिंग अभियानको लागि सबै सफा र ताजा ईमेल मार्केटिंग सूची प्रदान गर्दछ। तपाईं कुनै पनि अन्य मेल सूची प्रदायक कम्पनीबाट राम्रो डाटा भन्दा बढि पाउनुहुनेछ। हामी तपाईंलाई 90% सही मान्य डाटा प्रदान गर्नेछौं। हाम्रो सबै डाटा डबल अप्ट-इन र अनुमति आधारभूत छ त्यसैले GDPR गुनासोको साथ कुनै समस्या छैन। हामी हाम्रो कुनै पनि डाटाबेसको एक अद्वितीय प्रतिलिपि बेच्ने गर्छौं। एक ग्राहकको लागि एक प्रतिलिपि
भर्खरका मेलि database डाटाबेसले तपाईंलाई कुनै पनि लक्षित देश, व्यक्ति, उद्योग, शहरबाट तपाईंको लक्षित सम्पर्क सूची निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। हामीबाट डाटा खरीद गर्नुहोस् सुरक्षित र ग्यारेन्टी गरिएको गुणवत्ता डाटा। साथै, तयार डाटा छ जुन तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं यसलाई आफ्नो अभियानहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, तपाईं हामीबाट मद्दत लिनुहुन्छ यदि तपाईंलाई ईमेल मार्केटिंग अभियानहरूको लागि कुनै परामर्शको आवश्यकता छ।
ईमेल डाटाबेस किन्नुहोस्
नमूना डेटा अनुरोध गर्नुहोस्
घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा » गिफी कसरी प्रयोग गरिन्छ? सेवा समाचारहरूको बारेमा
14 Feb, 2019 in डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा ट्याग गिफी कसरी प्रयोग गरिन्छ by जकारिया हुसेन
के तपाईंले प्रयोगको बारेमा सोच्नुभएको छ? Giphy तपाईको डिजिटल मार्केटिंगमा? होइन, हामी पूर्ण रूपमा पागल छैनौं। इन्टरनेटमा सब भन्दा लोकप्रिय GIF प्लेटफर्ममा धेरै विकल्पहरू छन् जुन यो पहिलो हेराईमा देखिन्छ, youtube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस् र लोकप्रिय ब्रान्डहरू जस्तै एनबीए वा वार्नरले पहिले नै उनीहरूको प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसोभए तपाईं पछाडि नहुनु होस्, यस प्लेटफर्ममा के समावेश छ र कसरी तपाईंको ब्रान्डबाट अधिक फाइदा लिन सकिन्छ हेरौं।
सबै भन्दा पहिले ... Giphy के हो?
Giphy एक GIF प्लेटफर्म मुख्य रूपमा यसको खोज इञ्जिन द्वारा परिचित। यो 2013 देखि अवस्थित छ तर प्रसिद्ध हुन थालेको केहि बर्ष पछि, जब ट्विटरले आफ्नो नेटवर्कमा यी प्रकारका फाईलहरू साझेदारी गर्न र हेर्न अनुमति प्रदान गर्न शुरू गर्‍यो। पहल तुरुन्त सफलता थियो, तर मूलतः GIFs पत्ता लगाउने र प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया केही बोझो थियो। तसर्थ, ट्विटर सामाजिक नेटवर्क मा एकीकृत गिफी फाईलहरूको एक पुस्तकालय सहित समाप्त भयो। यसका लागि धन्यवाद, आज GIF खोज इञ्जिनसँग 10 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ताहरू छन्।
म कसरी मेरो ब्रान्डको लागि गिफि प्रयोग गर्न सक्छु?
यदि तपाईं गिफिलाई अनलाइन मार्केटिंग गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंलाई सबैभन्दा पहिले जान्नु आवश्यक छ कि तपाईं सक्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै GIFs अपलोड गर्नुहोस् सित्तैमा। र के यो यस प्लेटफर्मको धेरै जसो सामग्री प्रयोगकर्ताहरू आफैं द्वारा सिर्जना र अपलोड गरिएको हो।
यसका लागि, गिफीले एक धेरै सहज निर्माता र GIFs का सम्पादक प्रस्ताव गर्दछ, जसले तपाईंलाई यी फाइलहरू तपाईंको आफ्नै छविहरू र भिडियोहरू सिर्जना गर्न, धेरै GIFs मर्ज गर्न, तिनीहरूलाई बिभिन्न सामाजिक नेटवर्कहरू र एक लामो एस्टेरामा अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईंको सामग्री मार्केटिंगका अन्य तत्वहरूसँग यो तपाईंको GIF सिर्जना र अपलोड गर्न पर्याप्त छैन, तपाईंसँग राम्रो प्रसार रणनीति पनि हुनुपर्दछ। यसका लागि विचार गर्न दुईवटा आधारभूत पक्षहरू छन्:
यो लेबल । शब्दहरू जुन तपाईं आफ्नो GIF ट्याग गर्न निर्णय लिनुहुन्छ प्रयोगकर्ताहरू यसलाई पत्ता लगाउन निर्णायक हुन्छ, त्यसैले आफैलाई तिनीहरूको जुत्तामा राख्नुहोस् र सोच्नुहोस् कि तपाईं यस प्रकारको सामग्री कसरी हेर्नुहुन्छ। तपाईंले GIF संसारको ट्रेंडिंग शीर्षकहरू पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ, जुन तपाईं गिफिको आफ्नै पृष्ठमा देख्न सक्नुहुनेछ।
यो अन्तर्क्रिया । सबै भन्दा लोकप्रिय GIFs स्थिति राम्रो र अधिक भ्रमणहरू आकर्षित गर्दछ। तपाईको सफल हुनको लागि, तपाईले त्यसलाई अन्य च्यानलहरू मार्फत हाइप दिनुपर्नेछ। ट्यागहरू प्रयोग गर्दा तपाईं इमानदार हुनको लागि हामी सिफारिस गर्दछौं: यदि तपाईं लोकप्रिय सर्तहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तर GIF विषयवस्तुसँग थोरै वा केही गर्न सक्नुहुन्न भने अन्तर्क्रियामा असर पर्छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा नभएको अर्को विकल्प हो गिफि स्टिकर लाइन वा फेसबुक मेसेन्जर जस्तै। अब तपाईं अनुप्रयोग मार्फत तपाईंको आफ्नै सिर्जना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईंको GIF लाई पूरक गर्न तपाईंसँग अझै एउटा स्रोत छ।
अन्तमा, यदि तपाईं गिप्फीलाई गम्भीर रूपमा मार्केटिंग च्यानलको रूपमा लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नै सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक च्यानल । यसमा तपाईं सबै GIF हरू संकलन गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले अपलोड गर्नुभयो र प्रकार, अभियान, उत्पादन वा अन्य कोटी अनुसार वर्गीकृत गर्नुहोस्।
← डिजिटल पुस्ताहरू: कसरी तपाईंको अनलाइन विज्ञापनको साथ शताब्दी आकर्षित गर्ने
सामाजिक वाणिज्य: यो के हो र यसलाई सामाजिक नेटवर्कहरूमा कसरी लागू गर्ने →
के तपाई आफ्नो लक्षित बिक्रीको बिक्री गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ? केवल तपाईंको नेतृत्वको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस् तपाईलाई हामीले लिनु पर्छ
बिक्री बिक्री गर्नुहोस्
देश इमेल डाटाबेस
इमेल सूची अष्ट्रेलिया
नौकरी शीर्षक द्वारा ईमेल सूची
सीईओ ईमेल सूची
वकील मेलिंग सूचीहरू
इन्जिनियरहरू मेलिङ सूचीहरू
HR निदेशक सूची
उद्योग इमेल सूची
स्कूलहरू मेलिङ सूचीहरू
अस्पताल मेलिङ सूचीहरू
संयुक्त राज्य अमेरिका बीमा पत्र सूची
परिधान कम्पनी डाटाबेस
कर्मचारी इमेल सूची
3M कम्पनी कर्मचारी
हलिबर्टन कम्पनी कर्मचारी
डेल इंक कर्मचारी
Apache Corporation कर्मचारी
टी मा कर्मचारी
बेकर ह्यूजेस कर्मचारी शामिल
यदि तपाइँलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ भने हामीलाई निशुल्क सम्पर्क भयो
राज्य पत्राचार सूची
रियल एस्टेट एजेन्ट सूची
नयाँ बिक्री बिक्री गर्छ
चिकित्सा पूरक बिक्री गर्छ
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मेल लिन्छ
बिटकेइन इमेल लिस्ट
वजन घटाने बिक्री गर्दछ
शर्त र शर्त
ईमेल सूची टोली बनाउनुहोस्
सबै अधिकार द्वारा सुरक्षित नवीनतम मेलिङ डाटाबेस
विषय द्वारा फोन सूची नम्बर
क्यासेंगो ग्राहक सहायता सफ्टवेयर हो, सीआरएम, वेबकेयर र वेबशाप्सका लागि प्रत्यक्ष च्याट सफ्टवेयर हो, ई-कमर्स वेबसाइटहरू, र साना व्यवसाय। क्यासेंगोले इमेल, लाइभटैट, सोशल मिडिया, फ्याक, स्वयं सेवा र अनलाइन च्याटलाई समर्थन गर्दछ। Casengo ग्राहक समर्थन र प्राय: सोधिने प्रश्नहरूको उत्तरको लागि प्रत्यक्ष कुराकानी FAQ पृष्ठ जाँच गर्नुहोस्, र कसरी Casengo ग्राहक समर्थन सफ्टवेयर, प्रत्यक्ष-च्याट, र helpdesk सफ्टवेयर जाँदै हुनुहुन्छ। ग्राहक समर्थन, ग्राहक सेवा, प्रत्यक्ष कुराकानी, सामाजिक सीआरएम, साना व्यापारिक सुझावहरू र Casengo उत्पादन अपडेटहरूमा रुचि राख्ने सबैका लागि ब्लग।
WhatsApp +8801758300772 थप्नुहोस्
कुराकानी सुरु गर्नुहोस्